Abakhiqizi bezitimela nabathengisi beSliding | Angeza
Ikhaya > Imikhiqizo > Isitimela esishisayo
I-Slide Rail iyinto efanelekayo ekuvulekeni okubushelelezi noma ukuvalwa kwesigaba se-Drawer.Addith sojantshi we-slide ifaka zonke ama-slide ama-slides, ama-slides athambile avutha ama-slide, i-metal box Drawer Slide, i-FGV Ama-Slides wekhabethe, afihlwe isilayidi njll. Sinengcebo yokwehlukahluka komkhiqizo esitimeleni esiswilayo, nakanjani singakuthola lokho okudingayo ngempela.
Ama-slides ethu ekhabethe enziwe ngensimbi egqamile egqamile noma insimbi engenacala, i-galvanization ye-Craft, i-Double-Laser Survavishini emelana nentambo yokudonsa futhi ayilona kalula.
Kufaka isicelo sezinto zokuqina zekhabethe isilayidi, ubuciko obuhle bokuthi ithrekhi yangaphandle kanye nezitimela zangaphakathi zinamandla. Ngokuhlola okuqinile kwekhwalithi, kungadonswa kalula izikhathi ezingaphezu kuka-50 000, futhi kungasekela izinto ngesisindo esingaphansi kwama-25 kg kanye nengxenye yesilayidi sosayizi ongakhokhela ngaphezulu kwe-25kg. Ikhabethe, lizothintwa yi-buffer livale kancane ikhabethe ngesikhathi sokucindezela ikhabethe emuva. Singanikeza izinketho ezahlukahlukene zokukhetha imibala, futhi ukuxhaswa okuhlukile kwezinto ezibonakalayo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende emazingeni ahlukene. Isicelo se-Multi-Scene, elungele ukusetshenziswa kwamakhabethe asindayo kakhulu anjengewadi, amabhuki, amatafula aseceleni kombhede, amadeski wekhompyutha, njll.